निकै खुशीको खबर : कुलमान घिसिङ आफै ख टिए विकास निर्माणको काममा, तीन करोड नेपालीबाट स्वागत - Taja Khoj Khabar
रोनाल्डोको कमाइको सबैभन्दा ठूलो माध्यम फुटबल होइन !
पूर्व युवराज्ञी हिमानी की छोरी पुर्णिकाले लेखिन यस्तो भावुक सन्देश
विश्वलाई साँचो माया भनेको के हो चिनाउने रुपा मगर
अरुलाई बचाउने डाक्टर शाह ३४ बर्षमै आफै बिदा भए
भ्वाइसमा जंगिइन् आस्था, रिसैरिसमा दीपलाई जवाफ
विज्ञान प्रविधि »
निकै खुशीको खबर : कुलमान घिसिङ आफै ख टिए विकास निर्माणको काममा, तीन करोड नेपालीबाट स्वागत
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको ३ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको रोजाइमा नियुक्त भएका कुलमानको अगुवाईमा एक वर्षभित्रै नै देश १८ घण्टासम्मको काहालीलाग्दो लोडसेडिङको मारबाट मुक्त भएको थियो ।
‘उर्जा क्षेत्रमा जुन उपलब्धी हासिल गर्छु भनेर आएको थिएँ, त्यो प्राप्त नै भएको जस्तो लाग्छ , तर पनि आन्तरिक बिजुली उत्पादन जसरी बढाउँछु भन्ने थियो, त्यो काममा केही ढिलाई हुन पुगेकै छ,’ उनले भने,’तर अब एक वर्षमा त्यो काम पनि पुरा गर्न सकिन्छ ।’
उनको कार्यअवधि अब एक वर्षमात्रै बाँकी छ । कुलमानले अबको एक वर्षमा आन्तरिक विद्युत उत्पादन दरलाई उच्च बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । उनले लोडसेडिङ व्यवस्थापन मात्रै नभएर प्राधिरणको संस्थागत संरचनाको सृदृढीकरणमा पनि धेरै प्रयासहरु गरिएकाले रत्यसले प्रतिफल दिन सुरु गरिसकेको बताए ।
तीन वर्षको अवधिमा उनले विभिन्न खालका महत्वपूर्ण कामहरु गरे । लोडसेडिङको अन्त्य भयो भने चुवहाट घटेर प्राधिकरण नाफामा गयो । यस्तै पछिल्लो सयममा उनले रुग्ण आयोजनालाई ततकालै सम्पन्न गर्न जोडबल लगाएका छन् ।
त्यसअनुसार उनले माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ भने कुलेखानी जस्तो बोझ बन्ने अवस्थामा पुगेको आयोजना पनि सञ्चालनका अन्तिम चरणमा छ ।
नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण थलिएको माथिल्लो तामाकोसीबाट पनि यस वर्षभित्रै विद्युत उत्पादन थाल्ने योजनाा छ । अरु थुप्रै प्रसारण तथा वितरणका रुग्ण आयोजनाहरुको काम सकिँदै गएका छन् । देशभर जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रम तीव्र हुँदै गर्दा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणले पनि व्यापकता पाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले करिब ७८० किलोमिटर प्रसारणलाइनको निर्माण सिध्यायो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो । रुग्ण सबस्टेशनहरुको निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
अरु सबै काम भएपनि जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण्का भएको ढिलाईमा कुलमान आफैं पनि सन्तुष्ट छैनन् । तर, जटिलतालाई चिरेर अबको एक वर्षभित्रै योजनाअनुसार गर्न बाँकी सक्ने योजना घिसिङको छ ।
हाल प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापनलाई अब स्मार्ट बनाउन पनि काम सुरु भएको छ । विभिन्न सुधारका कामले प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ ।
तर, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक विषयमा प्राधिकरणभित्र योजना बनाएजस्तो काम गर्न सकेको छैन । यद्यपी प्राधिकरणभित्र पहिलोजस्तो कर्मचारी संयन्त्रको मनलाग्दी हावी छैन ।
चुहावट नियन्त्रण र नाफामा फड्काे
प्राधिरकणले गत एक वर्षमै १४९ प्रतिशत नाफा वृद्धि गर्‍यो । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्रसारण र वितरणलाइनको सुदृढीकरणमा केन्दि्रत भएको विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड नाफा आर्जन गरेको हो ।
२०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा रुपमा प्राधिरकणमा प्रवेश गरेका थिए । उनी आउँदा प्राधिकरण वाषिर्क ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो ।
तर, घिसिङ नेतृत्वमा आएको ११ महिनामा नै घाटा हटाउँदै १ अर्ब ४६७ करोड नाफा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भयो ।
त्यसपछिका आर्थिक वर्ष २०७४/७४ मा पनि प्राधिकरणले २ अर्ब ८५ करोड नाफा कमायो । गत वर्ष भने प्राधिकरणको नाफामा उच्च वृद्धि भयो ।
योसँग विद्युत प्राधिकरणको कुल सञ्चित नोक्सानी १५ अर्ब १३ करोडमा झरेको छ । कुलमान नेतृत्वमा आउँदा प्राधिरकणको कुल सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा प्राधिकरकणको सञ्चित नोक्सानी २५ अर्ब ५९ करोड थियो । प्राधिकरणले एक वर्षमा नै सञ्चि नोक्सानी १० अर्बले घटाएको छ ।
प्राधिरकणले वर्षैसाल आफ्नो सञ्चित नोक्सानीलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । अबको एक देखि दुई वर्षमा प्राधिकरण सञ्चित नोक्सानीबाट बाहिर निस्कने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आˆनो नाफा बढाउँदै लगेकाले सञ्चित नोक्सनीलाई शुन्यमा झार्न लामो समय नलाग्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
३४ वर्षसम्म प्राधिकरण निरन्तर घाटामा थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी भएर आउँदा प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८ अर्ब ८९ करोड थियो ।
प्राधिकरण उच्च घाटमा गएपछि आव ०६७/६८मा सरकारले सबै सञ्चित नोक्सानी मिनहा गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सनीलाई सरकारले मिनाहा गर्नुपरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिरकणले ३ वर्षकाबीच विजुली चुहावट १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएको छ । गत एक वर्षमा मात्रै ५ प्रतिशत चुहावट कम भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वर्ष चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ ।कुल प्रसारण भएको विजुली र उठेको राजश्व गणना गरेर चुहावटको हिसाव निकालिन्छ । जति कम राजश्व उठ्छ, त्यति नै चुहावट बढी हुन्छ ।
२०७३ को भदौमा कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशकमा पदबहाली गर्दा विद्युत चुहावट दर २५.७८ प्रतिशत थियो । एक चौथाई बिजुलीको राजश्व त्यसै हराउने अवस्थालाई नेतृत्वमा आएका उनले ११ महिनामै २२.९० मा झारेका थिए ।
लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चुहावट नियन्त्रण अभियान जारी रह्यो । पछिलो तीन वर्षमा मात्र विद्युत प्राधिरकणले चुनावटको दरलाई झण्डै १० प्रतिशतले घटाएको छ ।
सुधारमा केन्द्रित प्राधिकरण
प्राधिकरण हाल प्रसारण र वितरणलाइनको सुधारमा केन्द्रित रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । अहिले प्रणालीमा भएका कमजोरीका कारण अनियमित रुपमा बिजुली जाने समस्या छ । घिसिङका अनुसार अब पावर सिस्टम भरपर्दो बनाउने चुनौती छ ।
गत वर्षमात्रै ६ हजार ट्रान्सर्फमर त्यसकै लागि थपिएको छ । अझै ७ हजार ट्रान्सर्फमर फेर्न तयारी हुँदैछ । विजुलीको माग बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रणालीलाई सदृढीकरण गर्न प्राधिरकणले विभिन्न कामहरु अघि बढाएको छ ।
‘हिजो लोडसेडिङ हुँदा मान्छेलाई सेवामा गुणस्तरको त्यति धेरै मतलव थिएन । अहिले यो विषय निकै गम्भीर ढंगले उठिसक्यो । गम्भीर पनि छ,’ उनले भने,’खाना खान लाग्या छ, बत्ति जान्छ, कुनै कार्यक्रम भइरहेको छ बत्ति जान्छ । मान्छे त आक्रोशित भइहाल्छ । अब यसमा सुधार हुँदैछ ।’
योसँगै प्राधिरकणले स्मार्ट मिटर जोड्ने, विजुलीका तार भूमिगत गर्ने लगायतका काम पनि सुरु गरेको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधार हुने र शहरी सौन्दर्यतामा पनि नबिग्रिने प्राधिकरण बताउँछ ।
यस्तै प्राधिकरणले दशेभित्रै ऊर्जा खपत बढाउन सवारी चार्जिङ स्टेसनशरु स्थापना गर्ने रइन्डक्सन चुल्हो बाल्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको छ ।
यस्तै प्राधिरणले तामाकोसीको निर्माण सकिएपछि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सुरु गर्नेछ । यसपछि प्राधिरकणले वर्षामा बढी भएको विजुली भारत पठाउनेछ । र, हिउँदमा नदीको सहत घटेर उत्पादन घटेको समयमा भारतबाट फिर्ता ल्याउनेछ ।
देशमा विकासका लहर ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले आँफै कोस्सिनु पर्छ भन्ने युक्तिलाई पालना गर्दै कुलमान घिसिङ रातदिन नभनी आफै अगाडी बढिरहनुभएको छ |
Previous: ८१ वर्षका वृद्धको भेष बनाएर अमेरिका जान लागेका ३२ वर्षका युवक विमानस्थलमा पक्राउ
Next: दुबईमा बस दु*र्घटना ६ नेपालीको मृ*त्यु !
दशैंकै दिन दशा ! भीषण असिना पानी ठुलो क्षति
यो हो विश्वको सबै भन्दा महँगो कार, जस्ले ३ मिनेटमा १०० किलोमिटरको यात्रा तय गर्छ !
यस कारण यी ३ समयमा कहिल्यै पनि नसुत्नुस ! जानकारीको लागि शेयर गरि जान्नुहोस !
धन कमाउन गएका विष्णुलाई के थाहा मरुभूमिको देशमा कहिल्यै नउठ्ने गरी निदाउँछु भनेर !
24×7 Nepali News
यी ४ राशिको चम्किदैछ भाग्य हेर्नुहोस कार्तिक ०१ गते शुक्रबारको राशिफल !
Taja khoj khabar is the best Nepali Online News Portal of Nepal which provides Latest News From World, Sports, Business and Entertainment Updates. Thanks you.
Taja Khoj Khabar © 2019